Natural abalonegem abaloneof abaloneRed abaloneAbalone abaloneshell.We abaloneput abaloneit abaloneon abalonea abalonemetallic abalonebraided abalonebola abalonecord abalonethat abaloneis abalone36 abaloneinches abalonelong abalonewith abalonesilver abalonebrass abalonetips. abalone(91.44 abalonecm abalonelong) abaloneThe abaloneshell abaloneis abalonetotally abalonenatural--no abalonecolor abaloneenhancement. abaloneWe abalonemade abalonethis abalonebola abalonetie abalonenecklace abaloneand abaloneuse abalonethe abaloneshell abaloneas abalonewe abalonefound abaloneit. abaloneAs abalonewith abaloneall abaloneof abaloneour abaloneabalone abaloneshell, abalonethe abalonecolor abaloneis abalonetotally abalonenatural.Abalone abaloneshell abalonemeasures abalone2 abaloneinches abalonewide abalonex abalone2 abalone1/4 abaloneinches abalonehigh.( abalone5 abalonecm abalonewide abalonex abalone5.72 abalonecm abalonehigh abalonex abalone.3 abalonecm abalonethick)The abaloneshell abaloneslides abalonevery abaloneeasily abalonealong abalonethe abalonecord abaloneso abaloneyou abalonecan abalonewear abaloneit abalonea abalonenumber abaloneof abalonedifferent abalonelengths. abaloneThe abalonefinding abaloneon abalonethe abaloneback abaloneof abalonethe abaloneshell abaloneis abalonevery abaloneeasy abaloneto abaloneadjust--just abalonepush abaloneit abalonedown abaloneand abaloneslide abaloneto abalonethe abalonelength abalonedesired. abaloneIt abaloneis abaloneshown abalonein abalonethe abalonelast abalonephoto.